निर्मला प्रकरणमा अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयासमा खेम भण्डारी, यस्ता छन् २० झुट – MySansar
झुट नम्बर १३ : लापरवाही कि प्रमाण नष्ट?
झुट नम्बर १५ : टुक्रा जाँच भइसक्यो?
2 thoughts on “निर्मला प्रकरणमा अझै पनि भ्रम छर्ने प्रयासमा खेम भण्डारी, यस्ता छन् २० झुट”
याे ब्लग पढे पछि सत्य कुरा चाई थाहा पाइन्छ। जे होस् ब्लगको दुनियाँमा mysansar नं १ हो ।
निर्मला जिज्ञाशु says:
अपराधीको संरक्षक यो खेम भण्डारीलाई किन सरकारले छाडा छोडीरहेको छ ? दुनिया संसारलाई थाहाँ भएको कुरा हो यो निर्मला पन्तको हत्यारो दिलिप सिंह बिष्ट को भिनाजु हो भनेर ! निर्मला प्रकरणको केषमा अदालत सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीहरु प्रति यो निकै छट्पटीदै छ र वकिल र न्यायधीश प्रति खनिन सुरुवात भएछ !